Xisbiga Midnimada iyo Cadaalada oo Cambaareeyey Afduubka Doorashooyinka dalka. – Kismaayo24 News Agency
Xisbiga Midnimada iyo Cadaalada oo Cambaareeyey Afduubka Doorashooyinka dalka.
by admin 3rd May 2019 025
Xisbiga Midnimada iyo Cadaalada ayaa ka hor-yimid sharciga doorashooyinka dalka ee shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya, kaasi oo uu ku qeexay “go’aan ay Dawlada Federaalka ahi ku afduubtay doorashooyinka Dalka”
HALKAAN KA AKHRISO WARSAXAAFADEEDKA XISBIGA:
Xisbiga Midnimada iyo Cadaalada wuxuu canbaareynayaa go’aanka ay Dawlada Federaalka ahi ku afduubtay doorashooyinka Dalka. Sharciga Doorashooyinka ee ay xukuumaddu ansixisay waa mid inta badan qodobbadiisu iska hor imaanayaan, qaarkood dastuurka ka hor imaanayaan, ujeedka ugu danbeeyana yahay muddo kororsi loo sameeyo madaxda Federaalka.
Sharciga doorashooyinka waa in uu waafaqsan yahay dastuurka dalka, hannaanka doorashana waa in uu ku yimaado talo wadaag dhexmara dowladda federaalka ah, Dawlad Gobolleedyada iyo Xisbiyada Siyaasadda.
Maamulka Galmudug oo gaashaanka udaruuray.
Maamulka Jubbaland oo kabiyadiiday boobka Doorashooyinka Dalka.
Madaxa Xukuumadda Galmudug Shiikh Shakir iyo Wafdi uu hogaaminaayo oo socdaal ku tagay deegaano….
Daawo Muuqaal: Axmad Madoobe oo ku baaqay in lagu qanco Xukuumadda Cusub ee dhawaan uuso Magacaabay